Feysal Xasan Xaashi oo sii dheereystay hoggaanka Gooldhalinta Horyaalka Somali Premier League – Gool FM
(Muqdisho) 22 Feb 2020. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Mogadishu City Club Feysal Xasan Xaashi ayaa hoggaanka gooldhalinta horyaalka Somali Premier League sii dheereystay kaddib markii uu shalay labo gool oo cajiib ah ka dhaliyay Naadiga Gaadiidka.
Kooxaha Gaadiidka iyo Mogadishu City Club ayaa shalay ciyaar xiiso badan waxay ku wada dheeleen garoonka Eng Yariisow Stadium, ciyaartaas oo ku dhammaatay 3-0 ay guusha ku raacday wiilasha Mogadishu City Club.
Ciyaaryahan Feysal Xasan Xaashi ayaa sanadkan ku jira bandhiggii ugu fiicanaa isagoo iminka dhaliyay sagaal gool, wuxuuna kooxdiisa u saftay sagaal kulan, taasoo kuu muujinaysa inuu hannaankiisa ciyaareed ee horyaalka Somali Premier League uu aad u wacan yahay kal ciyaareedkan.
Laacibkan ayaa waxaa ugu dambeysay inuu ku guuleysto gooldhalinta horyaalka Somali Premier League sanad ciyaareedkii 2015-kii, xilligaasoo uu kula guuleystay Kooxda Jeenyo, balse sanadkan waxa uu doonayaa inuu ku guuleysto gooldhalinta horyaalka.
Si kastaba ha noqotee, kooxda Mogadishu City Club ayaa kulankii ugu dambeeyay horyaalka wajiga hore waxay ku soo afjartay guul kaddib markii 3-0 ay ugu taqaluseen naadiga Gaadiidka.